Akụkọ - Ihe na-akpata na ngwọta nke mgbapụta mmanụ site na nkewa mmanụ nke piston air compressor
Ngwunye mmanụ nwere njikọ chiri anya na ihe ndị na-esonụ: nsogbu mma mmanụ, nsogbu usoro ikuku compressor, ngwá ọrụ nkewa mmanụ na-ezighị ezi, adịghị ike na nhazi usoro nkewa mmanụ na gas, wdg N'oge nhazi n'ezie, anyị chọpụtara na ọtụtụ n'ime mkpesa adịghị akpata. site n'ịdị mma mmanụ.Yabụ, na mgbakwunye na nsogbu dị mma nke mmanụ, olee ihe ndị ọzọ ga-eduga na mgbapu mmanụ?Na omume, anyị kwubiri na ọnọdụ ndị a ga-edugakwa na ntapu mmanụ:
1. Nrụgide valve nrụgide kacha nta
Ọ bụrụ na enwere ebe mgbapụ na akara nke valvụ kacha nta ma ọ bụ valvụ nrụgide kacha nta ka emepere tupu (n'ihi nrụgide mmeghe nke onye ọ bụla na-emepụta ya, oke n'ozuzu bụ 3.5 ~ 5.5kg / cm2), oge nrụgide maka iguzobe mmanụ na gas tank na mmalite nke ọrụ nke igwe ga-abawanye.N'oge a, ntinye nke mmanụ mmanụ gas n'okpuru nrụgide dị ala dị elu, ọnụ ọgụgụ na-agbapụta site na mpempe mmanụ na-adị ngwa ngwa, ọnụ ọgụgụ nke mmanụ na-abawanye, mmetụta nkewa na-ebelata, Nke a na-eduga n'inwe nnukwu mmanụ ọkụ.
Ngwọta: rụkwaa valvụ nrụgide kacha nta ma dochie ya ma ọ dị mkpa.
2. A na-eji mmanụ injin na-erughị eru
Ugbu a, n'ozuzu ịghasa ikuku compressors nwere elu okpomọkụ nchebe, na tripping okpomọkụ bụ n'ozuzu banyere 110 ~ 120 ℃.Otú ọ dị, ụfọdụ ígwè ọrụ na-eji mmanụ engine na-erughị eru, nke ga-egosi ọkwa dị iche iche nke oriri mmanụ mgbe ikpo ọkụ dị elu (dabere na nke a, okpomọkụ dị elu, na-abawanye oriri mmanụ), ihe kpatara ya bụ na okpomọkụ dị elu, mgbe ọ gasịrị. Nkewa nke mbụ nke gbọmgbọm mmanụ na gas, ụfọdụ ụmụ irighiri mmiri mmanụ nwere ike inwe otu usoro ịdị ukwuu dị ka mkpụrụ ndụ ikuku gas, na dayameta molekụla bụ ≤ 0.01 μ m.Mmanụ ahụ siri ike ijide na ikewapụ, na-akpata nnukwu mmanụ ọkụ.
Ngwọta: chọpụta ihe kpatara oke okpomọkụ, dozie nsogbu ahụ, belata okpomọkụ, ma họrọ mmanụ engine dị elu dị ka o kwere mee.
3. Atụmatụ nke tank nkewa mmanụ na gas adịghị ahazi
Ụfọdụpiston ikuku compressorndị na-emepụta ihe, mgbe ha na-eme atụmatụ tank nkewa nke mmanụ-gas, atụmatụ nke usoro nkewa nke mbụ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya na ọrụ nkewa bụ isi adịghị mma, na-akpata nnukwu mmanụ alụlụ itinye uche tupu nkewa mmanụ, mmanụ dị arọ na enweghị ike ọgwụgwọ, na-akpata ya. nnukwu mmanụ oriri.
Ngwọta: onye nrụpụta kwesịrị imeziwanye atụmatụ ma melite ọrụ nke nkewa mbụ.
4. Ịfefe mmanụ
Mgbe olu mmanụ ụgbọala karịrị ọkwa mmanụ nkịtị, a na-ewepụ akụkụ nke mmanụ ahụ site na ikuku ikuku, na-ebute oke mmanụ ọkụ.
Ngwọta: mgbe emechiri, mepee valvụ mmanụ ma kpochapụ mmanụ ahụ na ọkwa mmanụ nkịtị mgbe ikuku ikuku dị na mmanụ na mmanụ gas kwụsịrị na efu.
5. valvụ nlele nlọghachi mebiri emebi
Ọ bụrụ na valvụ nleghachi mmanụ ahụ mebiri emebi (site n'otu ụzọ gaa n'ụzọ abụọ), nrụgide dị n'ime nke ọkpọ ọkpọ mmanụ ga-awụsa nnukwu mmanụ azụ n'ime ọkpọ ọkpọ mmanụ site na ọkpọkọ nlọghachi mmanụ mgbe emechiri.Mmanụ n'ime mmanụ knockout drum agaghị amịkọrọ azụ n'isi igwe n'oge ọrụ igwe na-esote, na-eme ka akụkụ nke mmanụ na-agbapụ na ikuku compressor na ikuku kewapụrụ (ọnọdụ a na-emekarị na igwe na-enweghị mmanụ sekit mmanụ. kwụsị valvụ na isi iyuzucha ọpụpụ nlele valvụ).
Ngwọta: lelee valvụ nlele mgbe ewepuchara ya.Ọ bụrụ na enwere ụdị dị iche iche, naanị dozie ya.Ọ bụrụ na valvụ nlele mebiri emebi, jiri nke ọhụrụ dochie ya.
6. Ngwá ọrụ ọkpọkọ mmanụ na-ezighị ezi
Mgbe ị na-edochi, ihicha na ịrụzi compressor ikuku, a naghị etinye mmanụ azụ azụ mmanụ n'ime ala nke mmanụ mmanụ (Ntụaka: ọ ka mma ịbụ 1 ~ 2mm site na etiti arc na ala nke mmanụ mmanụ), ya mere. mmanụ ndị kewara ekewa enweghị ike ịlaghachi n'isi n'oge, na mmanụ a na-akwakọba ga-agwụ na ikuku abịakọrọ.
Ngwọta: kwụsị igwe ma mezie ọkpọkọ nlọghachi mmanụ na ịdị elu ezi uche dị na ya mgbe emechara nrụgide nrụgide ka ọ bụrụ efu (ọkọlọghachi mmanụ bụ 1 ~ 2mm site na ala nke onye na-eke mmanụ, na enwere ike itinye ọkpọkọ nlọghachi mmanụ na-achọsi ike n'ime ya. ala nke ihe nkesa mmanụ).
7. Nnukwu oriri gas, oke ibu na iji nrụgide dị ala (ma ọ bụ nkwekọ n'etiti ikike ọgwụgwọ mmanụ ahọpụtara tupu igwe ahụ pụọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ike iyuzucha nke igwe ahụ siri ike)
Ibu obere nrụgide ojiji pụtara na mgbe onye ọrụ na-ejipiston ikuku compressor, Nrụgide iyuzucha anaghị eru nrụnye arụ ọrụ nke ikuku compressor n'onwe ya, mana ọ nwere ike imezu ihe achọrọ oriri gas nke ụfọdụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ.Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ ụlọ ọrụ abawanyela akụrụngwa oriri gas, nke mere na oke ikuku nke ikuku compressor enweghị ike iru nguzozi na oriri gas nke onye ọrụ.A na-eche na nrụgide iyuzucha nke ikuku compressor bụ 8kg / cm2, ma ọ bụghị ihe bara uru Mgbe a na-eji ya eme ihe, nrụgide bụ nanị 5kg / cm2 ma ọ bụ ọbụna ala.N'ụzọ dị otú a, ikuku compressor na-arụ ọrụ ogologo oge na-enweghị ike iru uru nrụgide ọzọ nke igwe, na-eme ka mmanụ na-abawanye ụba.Ihe kpatara ya bụ na n'okpuru ọnọdụ nke ikuku na-ekpochapụ mgbe niile, ọnụ ọgụgụ mmanụ na gas na-esi na mmanụ na-agbapụta ngwa ngwa, na alụlụ mmanụ dị elu nke ukwuu, nke na-eme ka ibu mmanụ dịkwuo njọ, na-ebute oke mmanụ.
Ngwọta: kpọtụrụ onye nrụpụta wee dochie ngwaahịa nkewa mmanụ nke nwere ike dakọtara obere nrụgide.
8. Akwụchiri eriri nloghachi mmanụ
Mgbe a na-egbochi pipeline mmanụ azụ (gụnyere valvụ nlele na ọkpọkọ nlọghachi mmanụ na ihuenyo nzacha mmanụ) site na ihe ndị si mba ọzọ kpuchiri, mmanụ a na-agbanye na ala nke onye na-ekewa mmanụ mgbe nkewa enweghị ike ịlaghachi na isi igwe, na condensed. A na-ekupụ ụmụ irighiri mmiri mmanụ site n'ikuku ikuku wee buru ikuku nke kewapụrụ iche.Ihe ndị a si mba ọzọ na-emekarị site na adịghị ọcha siri ike na-ada site na ngwá ọrụ.
Ngwọta: kwụsị igwe ahụ, wepụ ihe niile ọkpọkọ nke mmanụ azụ mmanụ mgbe a kwụsịrị nrụgide nke mmanụ mmanụ na efu, ma kpochapụ ihe ndị mba ọzọ egbochiri.Mgbe a na-ewu ihe nkesa mmanụ na ngwá ọrụ ahụ, ṅaa ntị iji hichaa mkpuchi nke mmanụ na mmanụ gas, ma ṅaa ntị ma enwere ihe siri ike na ala nke isi mmanụ mmanụ.
Oge nzipu: Nov-16-2021